Ukuvuvukala njalo ezihlobene: izimbangela, ukuxakeka kanye nokwelashwa
Esinye sezifo ezivamile izifo zabesifazane kuyinto ukuvuvukala epididymis. Inqubo ingahle tube esibelethweni kanye fallopian ohlangothini olulodwa noma zombili ngasikhathi sinye. Lesi sifo ubizwa nangokuthi adnexitis.
Uma ekwelapheni ukushisa acute kwenziwa Akakwazanga noma ngasekupheleni, injalo ezingamahlalakhona eba. Singasho obuzwiwa exacerbations ezikhathini ezithile noma uqhubeke ngaphandle kwabo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ezingelapheki ukuvuvukala izinto ezihlobene nakanjani kuholela izinguquko ezingenakuhlehliswa kwezitho, okuyinto ephazamisa ukusebenza kwawo okuvamile.
yezinkinga Okuvame kakhulu lesi sifo kukhona ukungazali kanye ubuhlungu okhalo. Ukungakwazi ukukhulelwa kungaba ngenxa ukwephula umsebenzi wesibeletho, okuholela ukuntula nge-ovulation efanele futhi hormone kudingekile kungukuthi esabiwe. Nokho, ukungazali ngokuvamile kwenzeka ngenxa ukuvimbela amaphayiphi ngenxa kumiswa ukuvuvukala nasezindaweni ezizungeze kubo.
Ngaphezu kwalokho, ngisho noma kungekho isimiso mechanical, ukuvuvukala kwephula isimo umsebenzi mucociliary is ibenze amaqanda avundiswa esibelethweni. Ngokungafani isidoda ngokwayo asikwazi ukuhambisa. Kulokhu, ngokuvamile kwenzeka ukhulela ethunjini. Lesi simo kuyingozi kakhulu ngenxa yokuphila abesifazane kanye nezempilo wabo wokubeletha.
Ngakho-ke, abaningi ngokuvamile kwenziwa emasontweni ekuqaleni sokukhulelwa ultrasound 5 namuhla ukuqeda lesi simo. Uma ukhulela ethunjini itholwa ngendlela esifike ngesikhathi, ngosizo tube laparoscopy ungasindiswa. Ngesikhathi izigaba kamuva Nogange lwawo ke ubizwa kanjalo kabana ukuthi akunandaba mqondo ukushiya umzimba, njengoba lokhu kungaholela ukuphindaphindwa isimo.
Nokho, namuhla abaningi ngokuvamile ukuvuvukala njalo ezihlobene akuyona phetho inqubo acute, futhi kwenzeka njengoba isifo ahlukile. Lokhu ngokuyinhloko nomthelela STD, ikakhulukazi i-chlamydia, mycoplasma futhi ureaplasma.
Lezi Amagciwane bavame ukunikeza isithombe esikhanyayo izimpawu. Ukuvuvukala ngokushesha kuba amahlala khona ngaphandle kokwelashwa futhi ekugcineni lasakazekela kwesibeletho futhi ezihlobene. Owesifazane ifunda ngalesi sifo, lapho kunemiphumela engelapheki.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuba ubonane nodokotela wakho njalo futhi bahlolwe. Lokhu kumele kwenziwe noma ngabe abanandaba uma kukhona izimpawu kancane ngokushesha. Kubaluleke ngokukhethekile ukuba bahlolelwe ngemva link asolisayo futhi ngaphambi kokukhulelwa. Lapho benza ubulili bebe bengathandani ngempela ukusebenzisa amakhondomu.
Futhi, ukubukeka kwalesi sifo futhi exacerbations yayo lula isisu ukufakwa IUD curettage zokuxilonga, ukucindezeleka, amasosha omzimba encishisiwe, amavithamini, ukungondleki kahle. Okungalapheki ukuvuvukala izinto ezihlobene Ungase futhi izinkinga sokukhulelwa. Okungenzeka ngisho yisisu.
Ekwelapheni lesi sifo esetshenziswa kabanzi Physiotherapy. Ngo exacerbations esimisiwe antibiotic, immunostimulants, futhi eziningi nezinye izidakamizwa. Ukwelashwa iyafana ukwelashwa inqubo oyingozi.
Ukuze zokuxilonga ukusetshenziswa adnexitis luhlolo, imisindo ephansi, futhi hysterosalpingography futhi laparoscopy. Owokugcina lezi futhi indlela ephumelelayo ukwelapha ukuvuvukala.
Abesifazane abaningi abazi ukuthi wabhekana nalesi sifo, banesithakazelo kanjani ukwelapha ukuvuvukala izinto ezihlobene ngempumelelo. Impendulo Universal kule mibuzo ingucha. Esimweni ngasinye udokotela kufanele baqonde. Ukwelashwa lwemithi izinqubo acute kukhona bendabuko more.
Ngo ukuvuvukala njalo isidingo acabangele ubude bayo, ngezinga izinkinga ngemva kokuhlinzwa, isimo amasosha omzimba, ukusabela komzimba yokwelapha. Ngaphezu kwalokho, kufanele silungiselele ukuthi ukwelashwa uzobe isikhathi eside.
Ngakho, ukuvuvukala njalo ezihlobene kungenzeka kubangelwa inqubo oyingozi noma kwenzeka ngokuzimela. imiphumela yakhe njalo kukhona ukungabi nenzalo, ubuhlungu bamathambo okhalo kanye nezinkinga ngesikhathi sokukhulelwa. Ukwelashwa futhi uphethwe yini kufanele babandakanywe ku udokotela omuhle.
Ubuhlungu sternum nge osteochondrosis, ubuhlungu ngemuva breastbone
Amaqiniso ezithakazelisayo kakhulu ngomculo. Amaqiniso ethakazelisayo umculo rock
"Torzhok zolotoshvei": umlando inkampani. Ibanga, ikhathalogi
Ihhotela Ikon Phuket 4 * (Phuket / Karon Beach, Thailand) izithombe kanye nokubuyekeza